सत्ताको संरक्षणमा सडक गाईजात्रा Global TV Nepal
सत्ताको संरक्षणमा सडक गाईजात्रा
ग्लोवल टि.भी. सोमवार, असार २८, २०७८ 0
सरकारको दायित्व र कर्तव्य भनेको सडकमा हुने कुनैपनि आबान्छित भीडलाई रोक्नु हो । कुनैपनि सडक प्रदर्शन हुनु सरकारको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हिसाबले बान्छनिय होइन पनि । तर, सत्तापक्षकै भातृसंगठन युवा संघबाट उपत्यकामा प्रदर्शनको गाईजात्रा गरिएको छ। कस्तो अचम्म, यहाँको राजनीति ? निषेधाज्ञाकै बीचमा कोरोनासंग निहुँ खोज्दै विपक्षी विरुद्ध सडक प्रदर्शन भएको छ।
काँही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने, झै यतिबेला नेपाली राजनीतिमा अनौठा अनौठा जात्रा भइरहेका छन् । यस्तै अनौठा जात्रा राजधानीमा आइतबार सत्ताको आडमा सडकमा विपक्षी विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ।सायद यस्ता दृष्तान्त विश्व राजनीतिमा कतै हुदैनन् होला । तर, नेपालमा भइरहेको छ, त्यो पनि सरकारको संरक्षणमा एमाले निकट युवा संघको आयोजनामा । माउ पार्टीले सरकार हाँकिरहेको छ, उसकै भातृसंगठन युवा संघले सडकमा विपक्षी विरुद्ध आवाज घन्काइरहेको छ। सामान्य अवस्थामा भए त , त्यो पनि ठिकै हो, भन्न सकिन्थ्यो होला । तर, परिस्थिति ४ जना मानिस एकै ठाउँमा उभिने अवस्था छैन ।
कोरोना महामारीले देशका अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा छ ।उपत्यकामा पनि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी राखेको छ। जारी निषेधाज्ञामा यसरी भीडभाड गर्नु, प्रदर्शन गर्नु कानुनको बर्खिलाप मात्रै होइन, महामारीलाई थप बल्झाउनु पनि हो । बैशाख १६ यताको निषेधाज्ञाले कोरोना संक्रमण दरमा केही घटेको मात्रै हो, पूर्ण नियन्त्रणमा आएको छैन। कोरोनाको त्रास र जोखिम उत्तिकै छ, तर, सरकार निकट युवा संघको सडक प्रदर्शनका अघि कोरोना जोखिमसंगै यो मुलुकका कानुन नियमहरु निष्काम झै भएका छन् । मानौ सत्ता र शक्तिको अघि कोरोना पनि डराएको छ, कानुनका पानाहरु च्यातिएका छन् । युवा संघको अघि कोरोना डराएको हुनुपर्छ र त यसरी कानुनको धज्जी उडाउँदै महामारीलाई चुनौती दिनेगरी उपत्यकामा प्रदर्शन गरिएको होला । यदि त्यसो होइन,भने सत्ताबाट संरक्षित युवा संघले सडक तताउनु उपयुक्त र बान्छनिय समय यो हो त? के यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ सत्तारुढ एमाले ओली समूह र उसको भातृ संगठनसंग छ त ?
कोरोनाको निहँुमा सर्वसाधारणलाई सडकमा एकछिन उभिन नदिने प्रहरी प्रशासन युवा संघको यो भीडसंग किन डरायो त? के सत्तामा हुनेले जे जे गरेपनि हुने हो ? सर्वसाधारण एक गासका लागि सडकमा आँउदा लाठी वर्षाउने प्रहरी कहाँ थियो र छ त?जनता महामारीसंगै बाढी पहिरो र डुबानको त्रासमा छन् । महामारीले रोजगारी र उत्पादन लुटिदिएको छ। रोग र भोक उत्तिकै छ । यसरी जनताको भोटले सत्तामा पुगेकाहरुले जनता भोक भोकै मर्दापनि त्यो पीडा र दर्द सुन्ने पटक्कै होइन। तर, सडकमा पाखुरी देखाएर राजनीतिक तमासा गरिएको छ। यो समय मसल देखाएर प्रदर्शन गर्ने बेला पक्कै होइन, यो समय त उद्दार र सहायताको हो । कस्तो अचम्म राजनीतिक नौटंकी पनि ? सर्वसाधारणलाई महामारीमा भित्रै थुन्ने सरकारले आफ्नै कार्यकर्ताको सडक प्रदर्शनलाई विजयउत्सव मनाइरहेको छ।
सरकारको दायित्व र कर्तव्य त सडकमा हुने यस्ता भीडभाँड रोक्नुपर्ने हो ।सडकमा हुने विरोध प्रदर्शनलाई सकेसम्म रोक्ने दायित्व र कर्तव्य पनि उसकै हो । तर, त्यसको ठीक उल्टो सरकारी युवा संघले प्रदर्शन गरेरै छाड्यो, सरकारले रोक्न भन्दा थप उस्काउन प्रेरित ग¥यो र त युवा संघले आँट गरेको हुनुपर्छ । तर, युवा संघले जे जे ग¥यो, त्यो राज्यको कानुन विरुद्ध मात्रै थिएन राजनीतिक रुपले बेइमानी पनि थियो र हो पनि ।
मौलाउँदै घृणाको राजनीति
देउवाको परिपक्व कुटनीतिक संकेत
मौलाउदै, अवैध नेटवर्किङ धन्दा
अवसर र चुनौतीबीच देउवाको सत्तारोहण
अहंकारले ढलेको ओली सत्ता
संसद विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ बुझाउँदै: राष्ट्रपति कार्यालय
नेपालद्वारा नेदरल्याण्ड्सलाई २ सय ३९ रनको चुनौति
दैलेखको आठविसकोटकी एक आमाले चार सन्तान सहित कर्णालीमा हाम फालिन, दुईको सव भेटियो
तीन दलको बैठक निष्कर्ष विहीन (भिडियो सहित)
थप ६ सय ५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
रहिनन् साहित्यकार गिरी